Rev. Khin Thidar – Full Gospel Assembly
Rev. Khin Thidar
ဆရာမ ခင်သီတာသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သန်လျင်မြို့ ပဲခူးစုရပ်ကွက်တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ဦးအောင်တင် နှင့် ဒေါ်နှင်းကြည်သားသမီးသုံးဦးအနက်တွင် အငယ်ဆုံးသမီးဖြစ်သည်။ သန်လျင်ပဲခူးစုတွင် ကျောင်းပညာသင်ရင်း ၁၉၈၈ အရေးအခင်းကြောင့်ကျောင်းမတက်ဖြစ်တော့ပါ။
ဒေါက်တာဒယ်နီ+ အန်တီအန်းမိသားစုနဲ့အတူနေပြီး ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်းကိုကြားပြီး ၁၉၉၆ မှာကယ်တင်ခြင်းရရှိပြီး ၁၉၉၉-၂၀၀၀ ခုနစ်မှာ FGBTC တက်အောင်ပြီး နယ်လှည့်ဧဝံဂလိ (၂)နှစ် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ၈.၁.၂၀၀၄ ခုနစ်မှာ FGAအသင်းတော်တွင်အစမ်းခန့်အမှုတော်ဆောင်အဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့သည်။
၁၂.၃.၂၀၀၅ ရက်နေ့တွင် ဦးဇော်မင်းလွင်နှင့်လက်ထပ်ပြီးသမီး (၃)ယောက်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သမီးများမှာ မဖူးပွင့်နဒီ၊ မဆုပြည့်ရတီ နှင့် မသင်းမြတ်စန္ဒီတို့ဖြစ်သည်
၈.၁.၂၀၀၆ နေ့မှာ FGA အသင်းတော်မှာ အချိန်ပြည့်ဆက်ကပ်ပြီး ယခုလက်ရှိသန်လျင် FGA အသင်းတော်တွင်ဦးဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ သန်လျင်မြို့ ညောင်သုံးပင်ရပ်ကွက် နှင်းဆီလမ်းတွင်မိသားစုနဲ့အတူပျော်ရွှင်စွာမေထိုင်လျက်ရှိသည်။
အကြိုက်ဆုံးကျမ်းချက်- ဖိလိပ္ပိ ၄:၁၃
စွဲကိုင်သောဆောင်ပုဒ်- ယောရူ ၁:၉